PSG နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ဂရဈဇျမနျးကို ရိုငျးရိုငျးစိုငျးစိုငျး ဆဲဆိုခဲ့တဲ့ ပီကေး
February 17, 2021 author one Articles 0
PSG အသငျးကို (၄-၁)ဂိုးနဲ့အရှကျတကှဲရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ ပထမအကြော့ပှဲမှာ ဘာစီလိုနာကစားသမားနှဈဦးဖွဈတဲ့ ဂရဈဇျမနျးနဲ့ ပီကေးတို့ အခငျြးမြားခဲ့ကွပွီး ပီကေးက ရိုငျးရိုငျးစိုငျးစိုငျးဆဲဆိုတဲ့အထိ အခွအေနတေငျးမာခဲ့ကွပါတယျ။
အဲဒီပှဲမှာ ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျ မကျဆီက ပယျနယျတီကနေ ဦးဆောငျဂိုးသှငျးခဲ့ပမေယျ့ ဘာပကေ ခပြေဂိုးပွနျသှငျးခဲ့ပွီး PSG အသငျးက ထောငျ့ကနျဘောကနျဖို့ ပွငျဆငျနခြေိနျမှာ ပီကေးနဲ့ ဂရဈဇျမနျးတို့ စကားမြားခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။ သူတို့နှဈဦး အပွနျအလှနျပွောဆိုနတောကို ကှငျးဘေးက မိုကျခရိုဖုနျးကနေ ပီပီပွငျပွငျ အသံဖမျးထားနိုငျခဲ့ပွီး စပိနျနာမညျကြျော အားကစားသတငျးစာ Marca က အဲဒီအဖွဈအပကျြကို အခုလိုဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
ပီကေး -“ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှု အသာရအောငျ ကစားကွကှ။ f***’s sake ၊ F***ing hell!
ဂရဈဇျမနျး – “အေးဆေးကစားပါကှ။ ဂရြီ။ လြှောကျအျောမနနေဲ့”
ပီကေး – “F***ing hell Grizzi, f***’s sake.”
ဂရဈဇျမနျး – “F*** you.”
ပီကေး – “No, f*** you. ငါတို့တှေ အခွအေနမေကောငျးဘူးကှ။ ဒီပုံစံအတိုငျးဖွဈနတော (၅)မိနဈလောကျရှိနပွေီ”
ဂရဈဇျမနျး – “အျောမနနေဲ့ကှာ”
ပီကေး – “Motherf*****, ငါတို့တှေ အရူးတှလေို လြှောကျပွေးနကွေတာကှ”
ဂရဈဇျမနျး – “အေး၊ ငါလညျး ပွေးနတောပဲလကှော”
အဲဒီအခြိနျမှာ ဂိုးသမားဖွဈသူ တာစတီဂနျဟာ ပီကေးနဲ့ ဂရဈဇျမနျးတို့ကို ဝငျတားခဲ့ပွီး ပွိုငျဘကျကစားသမားတှကေို လူကပျထားဖို့ စခေိုငျးခဲ့တာကွောငျ့ ရနျပှဲက ဒီထကျမဆိုးရှားခဲ့တာပါ။ အဲဒီအဖွဈအပကျြအပွငျ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ အိမျကှငျးမှာ PSG အသငျးကို ဘာပရေဲ့ ဟကျထရဈ၊ မှိုကျဈကိနျးရဲ့ သှငျးဂိုးတှနေဲ့ အရှုံးပေးခဲ့ရလို့ နူးကမျ့မှာ စိတျပကျြစရာ ညဖွဈခဲ့ရတယျလို့ပွောရမှာဖွဈပါတယျ။
အခုဆိုရငျ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ PSG ကို အိမျကှငျးမှာ (၄)ဂိုးအထိပေးခဲ့ရလို့ ဒီဂိုးကှာခွားခကျြကို ပွနျလညျခပြေပွီး ကှာတားဖိုငျနယျတကျဖို့က အရမျးခကျခဲသှားပါပွီ။ ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီ ခနျြပီယံလိဂျရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့မှာ ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ အဝေးကှငျးမှာ PSG ကို (၄)ဂိုးပွတျရှုံးနိမျ့ခဲ့ပမေယျ့ အိမျကှငျးမှာ (၆-၁)ဂိုးနဲ့ ပွနျလညျအနိုငျယူပွီး မယုံနိုငျစရာ Come Back နိုငျပှဲရရှိခဲ့ဖူးပမေယျ့ အခုအခြိနျမှာ အဲဒီလို စှမျးဆောငျပွနိုငျမလားဆိုတာကတော့ သံသယဖွဈစရာပါပဲ။
PSG နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ဂရစ်ဇ်မန်းကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဆဲဆိုခဲ့တဲ့ ပီကေး
PSG အသင်းကို (၄-၁)ဂိုးနဲ့အရှက်တကွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့် ပထမအကျော့ပွဲမှာ ဘာစီလိုနာကစားသမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂရစ်ဇ်မန်းနဲ့ ပီကေးတို့ အချင်းများခဲ့ကြပြီး ပီကေးက ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဆဲဆိုတဲ့အထိ အခြေအနေတင်းမာခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် မက်ဆီက ပယ်နယ်တီကနေ ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းခဲ့ပေမယ့် ဘာပေက ချေပဂိုးပြန်သွင်းခဲ့ပြီး PSG အသင်းက ထောင့်ကန်ဘောကန်ဖို့ ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ ပီကေးနဲ့ ဂရစ်ဇ်မန်းတို့ စကားများခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦး အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေတာကို ကွင်းဘေးက မိုက်ခရိုဖုန်းကနေ ပီပီပြင်ပြင် အသံဖမ်းထားနိုင်ခဲ့ပြီး စပိန်နာမည်ကျော် အားကစားသတင်းစာ Marca က အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို အခုလိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပီကေး -“ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု အသာရအောင် ကစားကြကွ။ f***’s sake ၊ F***ing hell!
ဂရစ်ဇ်မန်း – “အေးဆေးကစားပါကွ။ ဂျရီ။ လျှောက်အော်မနေနဲ့”
ပီကေး – “F***ing hell Grizzi, f***’s sake.”
ဂရစ်ဇ်မန်း – “F*** you.”
ပီကေး – “No, f*** you. ငါတို့တွေ အခြေအနေမကောင်းဘူးကွ။ ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေတာ (၅)မိနစ်လောက်ရှိနေပြီ”
ဂရစ်ဇ်မန်း – “အော်မနေနဲ့ကွာ”
ပီကေး – “Motherf*****, ငါတို့တွေ အရူးတွေလို လျှောက်ပြေးနေကြတာကွ”
ဂရစ်ဇ်မန်း – “အေး၊ ငါလည်း ပြေးနေတာပဲလေကွာ”
အဲဒီအချိန်မှာ ဂိုးသမားဖြစ်သူ တာစတီဂန်ဟာ ပီကေးနဲ့ ဂရစ်ဇ်မန်းတို့ကို ဝင်တားခဲ့ပြီး ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေကို လူကပ်ထားဖို့ စေခိုင်းခဲ့တာကြောင့် ရန်ပွဲက ဒီထက်မဆိုးရွားခဲ့တာပါ။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်အပြင် ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ အိမ်ကွင်းမှာ PSG အသင်းကို ဘာပေရဲ့ ဟက်ထရစ်၊ မွိုက်စ်ကိန်းရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ အရှုံးပေးခဲ့ရလို့ နူးကမ့်မှာ စိတ်ပျက်စရာ ညဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ PSG ကို အိမ်ကွင်းမှာ (၄)ဂိုးအထိပေးခဲ့ရလို့ ဒီဂိုးကွာခြားချက်ကို ပြန်လည်ချေပပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်တက်ဖို့က အရမ်းခက်ခဲသွားပါပြီ။ ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ အဝေးကွင်းမှာ PSG ကို (၄)ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် အိမ်ကွင်းမှာ (၆-၁)ဂိုးနဲ့ ပြန်လည်အနိုင်ယူပြီး မယုံနိုင်စရာ Come Back နိုင်ပွဲရရှိခဲ့ဖူးပေမယ့် အခုအချိန်မှာ အဲဒီလို စွမ်းဆောင်ပြနိုင်မလားဆိုတာကတော့ သံသယဖြစ်စရာပါပဲ။
ယူနိုကျတကျနဲ့ (၄)နှဈသကျတမျးရှိ စာခြုပျသဈခြုပျဆိုခဲ့တဲ့ ဂရငျးဝုဒျ
မှတျတမျးကောငျးယူတဲ့အပွငျ အကွားအမွငျပါရတဲ့ ဘတျပီ